18 may waa Maalintii Guusha iyo Midnimo | ToggaHerer
← ODOROS MALE-AWAALKA MUUSE BIIXI MADAXWEYNE AH. Qaybtii 2aad. Qalinkii Cabdinaasir Axmed Abraham
Daawo: ” Dawladan Fadaralka ee la sheegaa waa Dawlada ay Samayteen Koonfurta Somaliya Waana Nasiib Daro in ay la hadli kari waayaan Somaliland Oo Qayb ka ahayd Midnimadii 1960 kii” Barnaamijkii Dood Qaran →
Waa lix iyo labaatan jir. Waa mahad Alle oo dalkeena Somaliland waxuu ku sugan yahay nabad, ammaan, iyo dimuquraadiyad. Hawl adduun dhammeys ma leh, waxa ina soo maray welina raadkeedu taagan yahay abaar culus oo xoolihii dhammeysay, dadkiina ka dhigtay faqri iyo bukaan socod iyo in dhimmatayba. Meynaan helin caawimadii caalamka kolkaad ka reebto qadhiidh af ka sheeg ah. Alle mahadii raxmaadkii wuu inoo bilaabmay, waxa se loo baahan yahay dib u kicin dadkii abaartu xoolo tirtay.
Waa arrintaas tan taabatay damaashaadkii aynu sameyn jirnay. Si kharaskha loogu bedelo mucaawino dadka abaarahu halakeeyey. Waxa xukuumad iyo shacbiba aynu isla garanay in loo rogo ololo lagu uruuriyo mucaawinada dan yarta xoolahu ka baxayn si loogu sameeyo xoolo siin (restocking) iyo barnaamajyo lagaga hor tago abaaraha sida dhir abuurka, ceelal qod iyo biyo joojin.
Waxa kale oo weli inaga dhiman waa aqoonsi caalami ah, waa mid aynu ku gaadhi doono samir, wadajir iyo dedaal, iyo mahadda Alle.
Qaranimada Soomaliland waxa loo huray dhiig, maal iyo nool. Waxa lagu helay kifaax hubaysan oo ururkii SNM ku guulaysatay. Waxaana lagu fooladeeyey Burco 18kii May 1991, kolkii qalin iyo qalbiba ay ku midoobeen beelahii SNM iyo beelihii ka baxsanaa ururka, ka dib markii dood dheer oo cad, si siman loo gorfeeyey.Waxa leysku raacay in lala soo noqdo qaranimadii luntay 1960, waxaana la dhisay dawlad ay hogaaminayso SNM muddo laba sano ah. Shirka Burco beelaha Soomaliland wey u dhammaayeen min Ceelaayo ilaa Lawyacaddo. Beelahii SNM iyo Beelahii kale si siman oo wadajir ah ayey ku go’aansadeen soo celinta Qarannimada Somaliland.
Tartanku ma aha mid ina ilowsiiya qaranimadeena, midnimada dal iyo danaha badan ee aynu ka simannay. Waa geed ka go’an inaynu qaranimada wado daafacno. Waa inaynu wadajir ugu halganaa ictiraafka. Waa inagoo kala xisbi ah wado shaqaynaa, sharkado wada dhisanaa, ururo bulsho wada maamulnaa. Ogow wax qabadka xukuumaddu dadka waa u siman yahay. Jidka la dhiso, dugsiga la bineeyo, ceelka la qodo, shaqaalaha mushaharka loo kordhiyo, cisbitaalka la dhiso, garoomada ciyaaraha, iyo madaarada midna reer ma leh. Waa mid loo siman yahay.
Farxadda damaashaadka ku bedel mucaawinada walaalahaga ay ku habsatay abaartu, farxaddeenu waa tan qalbiga iyo niyadda oo ah mid dhammaan aynu ka simannay.